तातो हावाका कारण ६५ को मृत्यु | Nagarik News - Nepal Republic Media
तातो हावाका कारण ६५ को मृत्यु
इस्लामाबाद– पाकिस्तानको दक्षिणी सहर कराँचीमा तातो हावाको कारण कम्तीमा ६५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कराँची सहरमा ४४ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुगेपछि ६५ व्यक्तिको मृत्यु भएको समाज कल्याण इदही समूहलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन्।
गत तीन दिनयता कराँचीको कोराङ्गी र सोहराब गोथ क्षेत्रबाट एक सय १४ व्यक्तिको शव पाइएको र तीमध्ये ६५ जनाको तातो हावाको कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको बताइएको छ । इदही फाउडेन्सनका प्रमुख फैसल इदहीले मंगलबार जानकारी दिएअनुसार ती क्षेत्रमा अहिले पनि कडा रूपमा तातो हावा चलेको छ।
यसबाट ठूलो संख्याका नागरिक प्रभावित भएका छन् । इदहीका अनुसार तातो हावाको कारण ज्यान गुमाउने आफ्नै घरमा कुनै चिकित्सकीय उपचार बिना बस्ने गरेका स्थानीय नागरिकहरु रहेका छन् । ज्यान गुमाउने सबैभन्दा कम उमेरकामा छ वर्षीय बालकदेखि बढी उमेरकामा ७८ वर्षीया वृद्धसमेत रहेका बताइएको छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७५ ०९:१४ बुधबार
पोखरामा डा. केसीको समर्थनमा दिनहुँ प्रदर्शन
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका माग राखेर १९ औं पटक सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको पक्षमा पोखरामा दिनहुँ प्रदर्शन हुन थालेको छ।
संक्रमणको आशंकामा पिसिआर गराउन टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा अस्पतालमा पुग्नेहरूमा संक्रमण नभएकाहरू पनि संक्रमित बन्ने डर देखिएको छ।
भान्छे कोरोना संक्रमित भएपछि प्रधानसेनापति सेल्फ आइसोलेसनमा
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आइतबारदेखि सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्।
५३ प्रतिशत संक्रमित उपत्यकामा
एक महिनायत लगातार काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ।